चालिस कटेकी खैरेनीले देएको यौन सुख | Kamsastra
Sex, चालिस कटेकी खैरेनीले देएको यौन सुख,
उस्लाई मैले उमेर सोधेको थिएं,४२ भन्थी । हुन पनि किन नहुनु छोरी नै १९-२० कि होली । तर मेरो पापी नजर छोरी भन्दा आमातिरा बढी थियो । त्यस्को कारण थियो । लोग्ने संग छुट्टिएर बसेकी आमामा यौनको भोक स्पष्ट देखिन्थ्यो त्यो पहिलो करण थियो । दोस्रो छोरी को नाठो थियो । उमेर ले ४० कटे पनि सम्पन्नता र ब्यक्तित्वले उसको बुढेउली लुकेको थियो । हरेक दिनको शारिरिका ब्यायामले शरिर भर्भराउंदो थियो । लुगा बहिरा बाटै पनि स्तनको पुस्टताले कही कतै ४० नाघेको देखिन्न थियो । बास्तवमा उसको शरिरले ४२ भन्ने हरुलाई चुनौती दिए झैं लाग्थ्यो । सृंगार र लुगा हेर्दा आमा छोरिमा प्रतिस्पर्धा भएझैं लाग्थ्यो ।जब जब उसलाई देख्थे मनमा एउटा प्रश्न आउथ्यो यस्ती राम्री स्वास्नी छोड्ने ले कस्ती पाएको होला । जब जब उ संग भेट हुन्थ्यो हालखबर साटासाटा हुन्थ्यो ।हासेर कुरा गर्थी तर उ भित्र कुनै कुनै अनौठो आवेग ले हांसो खोस्न खोजेझै लाग्थ्यो अनि उ त्यो आवेगलाई कृतृम मुस्कानले ढाक्न खोज्थी ।उ मेरो ठिक्क अगाडिको अपार्ट्मेन्टमा भएर पनि हाम्रो आउने जाने थिएन । केवला बाहिरा भेट हुँदा बोलचाल हुने मात्रै हो । कृसमसको अघिल्लो दिना उ फेरी पार्कइङ्मा भेट भ इ । मैले उ कृस्चिया न भएकाले शुभकामना दिए उस्ले स्विकार गरी र मलाई भोली कसरी मनाउने बिचार छ भनेए मैले म हिन्दू हुं हामी मनाउदैनौ भने ।मैले उसको योजना सोधे उसले आफ्नो परिवार अर्को स्टटेमा भएको र छोरी पनि आफ्नो बोइफ्रेण्डको घर अर्को स्टेटमा भएकाले उसंगै गैसकेकी ले यसपालिको आफ्नो पनि कुनै योजना नरहेको बताइ । मैले उसलाई ल मैले तेरो कृस्ट्मस रमाइलो बनाउन सक्छु भने मलाई भन्नु मेरो पनि बिदा नै हो भने ।उसले भोली आफ्नो घरमा आउन निमन्त्रणा दि मैले कसरी मनाउनु पर्छ मलाई थाहा छैन भन्न है त भने । उसले हुन्छ भनेए हामी छुटिएऔं ।
भोलिपल्ट कोसैले बिहानै ढोका ढक््ढकायो । ढोका खोल्दा उ नै रैछे अनि मलाई सोधी हिजो सहयोगा चाहिए माग्नु भनेको आज माग्न आए । मैले केक बनाउन लागेको ठ्याक्कै चिनी सक्केको रैछ मलाई अलिकती सापटी दिन्छस् मैले एउटा शर्तमाउस्लाई भने: तेस्को लागी मलाई केक बनाउन सिकाउनु पर्छ उसले हास्दै भनेए अवश्य .।एकछिन पछि म उसको म गएं। केक् बनाउदै रैछे।उसले मलाई सिकाइ । मैले पनि उस्लाई सक्ने जती सहयोगा गरे । केक को पिठो को धुलो लुगा भरी लागेको थियो । उसको पनि तेस्तै थियो मैले म नुहाएर आउछु भने उसले पनी ठिकै छ त्यो बेला सम्मा म पनि सबै कुरा रेडी बनाउछु नुहाउन्छु भन इ . म नुहाएर एकछिन पछी उसको मा गए । ढोका लक थिएन म भित्र पसें ।उसले टेबला भरी केक,चकलेट,मासु वाइन सजाएर राखेकी रैछे । मैले उस्लाई बोलाएं उ बोलिन । एक्छिन कुरेपछी म पिसाब गर्न शौचालय गएं । उसको शौचालयमा धारा खोलेको आवाज आइरहेको थियो । तर ढोका खुल्लाई थियो । म ढोका भित्र पसें ।उसको नुहाउने ठाउं पनि त्यहाँ नै थियो ।
उ भित्र नुहाउदै रैछ । म एक निमेशका लागी अत्तालिए झै भए । अनि फेरी एक्पतका हेरे । उ आफ्नै शुर मा नुहाउदै थि । धारको आवजले होला सायदा म त्यहाँं आएको उसले थाहा नै पाइन ।म एकसुरले उस्लाई हेरिरहे । म मा त्यो बेला सम्म पनि यौन चाहना भन्दा उसको त्यो शरिर हेर्ने लालसा मात्रै जागेको थियो ।शिशा भित्रको उसको शरिरा पुरै प्रष्टा थिएन तर शरिरको स्वरुपा म रार्मो संग अन्दाज लगाउन सक्थें .
उसको हात कैले स्तन मा हुंथ्यो त कैले गुप्तांग तिर । हुनता उ बिच रा त आफ्नै सुर मा नुहाउंदै थि ।उ कैले म तिर शारिर पार्थी त कैले उसको पछाडी को भाग मात्रै मैले देख्न पाउन्थे । म आफुलाई उसको नजरा बाट बचाउदै त्यो दृश्य हेरिरहेको थिए । उ नुहाएर निस्किन लागी म हत्तारिएर लुके । उ रुमाल बेरेर आफ्नो आफ्नो कोठा भित्र छिरी । म मा उस्लाई हेर्ने कौतुहला बडेर आएको थियो उसको बेडरुम माथिल्लो तल्लामा थियो । उ माथी गएपछी म लुक्दै उसको पछी लागे । उसले आफ्नो रुमला खोली र शरिरमा कृम दल्न थाली । यसपटक म उसको नग्न शरिरा राम्रो संग हेर्न सक्थे ।मेरो पहिलो दृस्टी नै उसको स्तन्मा थियो उसले अत्यन्त कोमल ढंगबाट आफ्नो स्तनमा कृमा लगाइ ।खुट्ट र हातमा उसले अर्कै कृम लगाउदै थि। अनि गुप्तांगको बाहिर पट्टि पनि उसले त्यो कृम लगाइ। एक्छिन् अर्को कृम दल्दै आफ्नो स्तनमा पनि उसले अर्को कृम दलि। मलै लाग्यो खुट्टामा हातमा र यौनांगमा दल्ने अर्कै कृम हुदो रैछ क्यार। एकछिन पछि उसले एउटा कपडा लि र खुट्टा,हातमा रगडन थालि अनि एक्छिन् पछि तेसरि नै त्यहि कपडाले आफ्नो यौनांग बाहिर रगडि। म के गरेको होला सोच्दै थिए। एक्छिन् मा उसका यौनांगका सम्पुर्ण रौ निस्किएर सफा चट भएका रहेछन्। अनि बल्ल् बुझे उसले व्याक्स् गरेकि रैछ। एक्छिनमा नै उसका यौनांगा रौंको जंगलबाट सफा खुला चौर देखिन्थ्यो।उसले त्यस्लाइ पुछिसकेपछि फेरि माथिकै कै बेसिनमा सायद पखलेको हुनु पर्छ। अनि आएर फेरि बसि र फेरि रुमाललेरुमालले शरिर पुछ्न थालि। जब उ आफ्नो स्तनमा रुमाल ले पुच्न थालि उस्लाइ केहि भये जस्तो भयो। उसले आफ्नो दहिने ह्हतको छोरि आउंलाले बुबुको टुप्पो चलाइअनि एक्छिन्का लागि आंखा बन्द गरि। जब उसले भर्खरै धोएर आएको यौनांगमा लै पुछि उसले फेरि आंखा चिम्लि र यौनांगको बिचमा रुमालले दल्न थालि। रुमालको खस्रो पन यौनांगमा रगड्दा सायद उसले आनंद प्राप्त गर्दै थि।उसले फेरि आंखा बन्द गरि र आफ्नो दाहिने हातको चोरि औंलाले यौनांग को बिचको छालालै प्रेमले चलाउन लागि अनि देब्रे हाथले आफ्नो स्तन माड्न। एक्छिन पछि उसले एउटा जेल झिकि र यौनांगभित्र लगाइ।अनि उसको त्यो सबै कृयाकलाप मेरो आंखाले सेकेन्डभरको लागि पनि नछोडेर हेर्दै थियो।उसले त्यतिकै माअ हात तन्काइ र एउटा लामो लिंग आकारको केहि हातमा लि। उसले सायद कतै त्यो अन गरि र आफ्नो यौनांगको बाहिरको उचालिएको छालामा बिस्तारै चलाउन थालि अनि एउटा हाथले बुबु माड्दै अर्को हाथ ले त्यो भाइब्रेटोरलाइ यौनांग भित्र पसाइ। अब उ बस्नुको सट्टा कैले सुतेर भित्र छिराउथि त कैले त कैले त्यो भाइब्रेटर लाइ तल राखेर तेस्माथि आफु बस्थ्हि। अनिबेला बेलामा मुख बाट आवज निकाल्थि। मैले देखे उ एक्दमै चरम यौन आनन्दको मुखमा छे। अचानक मेरो फोनको घण्टि बज्यो। मैले फोन खल्ति बाट झिक्न लाग्द महसुस भयो थाहै नपाइ मेरो लिंग पनि उताउलो भैसकेको रैछ कुन बेला मेरो हात मेरो पाइण्टको अवरोध चिर्दै लिंग खेलैरहेको रैछ।मैले खल्तिमा हात पुराउदा सम्म फोनले धेरै घण्टि दि सकेको थियो। यौनानदको चरमसिमा पुग्न लागेकि त्यो आइमाइ झुरुक्क उठि। उसले मलाइ देखि। एकमनले मौका यहिहो नछोड् भनेर मनले भन्थो अर्को तिर यो बिदेशमा खैरिनि रिसाइ भने त केके हुने हो भन्ने डर पनि थियो अनि मैले भने"आइ एम सरि"। उसले हासेर"युड् यु लाइक टु ज्याइन"भनि। अब ढिला गर्न हुन्न भन्ने लाग्यो। म दौडेर गए र उसलाइ लामो किस गरे अनि सङै मेरो हात थाहै नपाइ उसको बुबु मा पुगिसकेको रैछ। ठुलो तर खदिलो त्यो दुध बास्तवमै आनन्द दायक थियो। मैले ढिलो नगरि उसको दुधको मुन्टोमा मुख पुर्याए र माया गरे अनि जिब्राको टुप्पोले त्यो मुन्टोलाइ चलाउन थाले। अब उसको मुख बाट आवज आउदै थिए। उ मलाइ अझ अझ भन्दै थि। ।अनि बिस्तारै आफ्नो हातलाइ मैले उसको यौनांगमा पुर्याए र बहिर बाट चलाउन थाले। मैले उ झन झन् आफ्नो भोकाएको स्वर बडाउदै थि। उसले आफैले धेरै समय पहिले नै खर्च गरिसकेका ले अब उस्लाइ धेरै बेर तड्पाउनु भन्दा उस्क्को भोकको यो क्षणलाइ पहिलो चरणमा पारेर दोस्रो चरण मा मैले दिने पुरुष सुख दिन्छु भन्ने सोछे र आफ्नो लिंग लाइ उस्को मुखमा पर्ने गरि उस्को भाइब्रेटोर् ले उसको यौनांग भित्र चलाइदिन थाले। उ मेरो लिंग लाइ बर्षौ पछि खान पाए झै गरि चुस्दै थि उ जति जति चरम सन्तुष्टि तिर पुग्थि त्यति मेरो लिंग लै चुस्ने बडि बल लगाउन्थि,हतारिन्थि।अन्तमा उसको चरमोत्कर्ष् सङै मेरो लिंगबाट पनि स्खलन भयो। उसले मेरो बिर्यलाइ तै पनि छोडेकि थिन। उ शिथिल भै तैपनि मेरो लिंग चुस्दै थि।आफ्नो मुखभरि को त्यो बिर्यलै निलेपछि मात्र उसले पहिलो बाक्य निकालि। बर्षौ पछि यसको स्वाद पाए। मैले त स्वाद नै बिर्सिसकेको रहेछु।मैले भने चिन्ता नगर् म तलाइ अब वाक्क नहुन्जेल ख्वाउछु। उ हासि।मलाइ लाग्यो यो चालिसेलाइ अब फेरि तताउन भर्खरै सकिन्न हामि एक्छिन् पल्टिए बसेउ। मैले उसको बुबु समाएर चलाउदै बसेको थिए। उसले मेरो लिंग चलाउदै थि। हामि गफ गर्दै थिएउ। आफ्नो भोक् त भर्खरै जागेको थियो। मैले बिस्तारै आफ्नो मुख् फेरि उसको बुबुमा पुर्याए र चुस्न थाले। अनि एउटा हाथले उसको यौनांग चलाउन।नथापाएर नै उ पनि कुन बेलाफेर् तातिसकेकि रैछे। उसले फेरि म संग लामो किस गरि र मेरो घांटि,छाति शुम्दै चुस्दै मेरो लिंगमा मुख पुर्याए। एक्छिन चुसि सकेपछि मेरो लिंग पनि पुर्ण तयार भयो मैले उसलाइ पल्टाए उसको यौनांगलाइ एक्छिन औंलाले चलाएपछि उसका दुबै खुट्टा उसको टाउको पट्टि पुर्याएरौ माथि जाइलागे। मेरो लिंग पस्ने बितिकै उसको मुखबाट आवज अयो ह्म्म्म।एक्छिनको समुन्द्र मन्थनपछि उसलाइ कोल्टे पारे उसको माथिपट्टिको खुट्टा खुम्चाएर फेरि जाइलगे।अनि घोप्टो पारेर फेरि आक्रमण गरे।उसको टाको तल यौनांग माथि पारेर बेडमा आड लागेर फेरि दन्काए। कसरति शरिर झुरुक्क उचालेर बोकेरै उस्लै तल माथि गर्न लगाए। उ मलाइ हरेक किसिमले साथ दिदैथि।उ अब फेरि शिथिल हुन लागि मैले बुझे उसले मलाइ चांडो गर्न भनि मैले आफ्नो गति बढाए। उ शिथिल बहि म पनि शिथिल भए। हामि एक्छिन् पल्टिएउ। अनि हाम्रो डिनर गरेउ। मैले भने आज हामि निर्बस्त्र डिनर् गर्नु पर्छ उ सहमत् भै। हामिले त्यसै गरेउ। वाइनको चुस्कि लिदै एक अर्कामा समहित हुदै हामिले आफ्नो डिनर सकायौ।उ घरि घरि मेरो मिठाइ भन्दै मेरो लिंग समात्थि चाट्थि। म पनि जिस्केर मेरो लुकाएर राखेको वाइन भन्थे र उसको बुबु समात्थे,मुन्टोचलाउन्थे र चुस्थे। वाइनको नशाले हाम्रो यौनको नशालाइ झन् झन् बडाउदै थियो।हामिले फेरि अर्को चरण शुरु गरेउ। आफुलाइ शुरक्षित बनाउन खोल लगाएर मैले उसको अर्को प्वालमा लिंग छिराए यसपटक उ कराइ। अगाडि पछाडि बिभिन्न पोजिसनमा हामि फेरि यौनानदमा डुबेउ। भोलिपल्ट मैले भने सधैं कृस्मस रहोस् तिम्रो जीवनमा। दुबै को आवश्यकता अनुसर भेट्ने बाचा सहित मैले घर छोड्नु पर्ने भयो।। मैले भने आवस्यकता अनुसार भेट्ने भन्छौ मलाइ त फेरि आवस्यकता परिसक्यो उ हासि र भनि म बुढि भैसके अब ऐले सक्दिन तर तिमिलाइ निरस हुन दिन्न उसले मलाइ तानि सोफमा बसाइ र मेरो लिंग पाइण्टबाट निकालेर चलाउन थालि। अनि मेरो मिठाइ भनेर चुस्न थालि मेरो बिर्य निस्कियो। उसले धुनै नपर्ने गरि चाटि जादा जादै उसले भनि मैले ढोका खुलै छोड्नुको कारण यहि थियो तर मैले तलाइ भन्ने सकेको थिन। जब म नुहाएर निस्किए मैले तेरो जुत्ता ढोकामा देखे मैले सोचे मेरो योजना सफल हुदैछ,त कतै लुकेको छस् मैले थाहा पाए अनि माथि गएर त्यो सबै गर्नु को कारण तलाइ तताउनु थियो। उ हासि। मैले उस्लाइ किस गरे र भने अर्को चोटिलाइ केइ गर्नु पर्दैन र मलाइ बिदा गरि।
Labels: Sex, चालिस कटेकी खैरेनीले देएको यौन सुख